Azonao atoro ahy ny fitsipika fototra sy ny fitsipika momba ny famaritana momba ny vokatra any Amazon?
Indrisy anefa, tsy misy toro-làlana ankapobeny na fitsipika momba ny famaritana ao amin'ny Amazon izay mety hiasa ho anao amin'ny vokatra azo antoka. Midika izany fa tokony hojerena amin'ny fikarakarana aloha ny fisainana amin'ny fomba fijery mahazatra hita ao amin'ny Internet, mba hahafantarana raha manompo tsara anao izy - na toy ny hoe, na mety mila manitsy amin'ny fomba hafa. Ary etsy ambany dia hanome anao soso-kevitra mahasoa momba ny SEO momba ny varotra sy toro-hevitra roa mahazatra mifandraika amin'ny fitsipika momba ny famaritana vokatra Amazon. Antena fa hanampy azy ireo izy ireo ary hanampy anao amin'ny fanatsarana ny famaritana ny vokatrao. Farany, mba hahita ny vokatrao manolotra eo amin'ireo tendro voafantina nasongadina ao amin'io tsena tena feno aterineto io.
Amazona Product Description Fitsipika sy fanamafisana
Ny pejy tsirairay amin'ny lisitry ny vokatra Amazon dia natao hanomezana sary lehibe momba ireo tombontsoa lehibe sy karazana Zavatra azo atolotra (ohatra, ny habe, ny fomba, ny singa amin'ny fampiasana isan'andro, ny fanoloran-kevitra mahasoa momba ny zavatra hafa azo ampiasaina ho an'ny, sns ...). Amin'ny ankapobeny, ny lalàna famariparitana momba ny vokatra Amazon dia manoro hevitra ny hamporisihana ireo mpivarotra izay nahazo ny lisitry ny vokatra azo avy amin'ny famaritana araka ny tokony ho izy, ny fampahafantarana momba ny fiantohana, ny torolàlana momba ny fikojakojana, ary ny teny mazava, ny fitsipi-pitenenana sy ny mari-pamantarana. Mitovy amin'ny hevi-baovao momba ny Search Engine Optimization (SEO), sa tsy izany?
Fomba fampiasana tsara ny famaritana ny vokatrao
Aza mampiasa ny karazan-dian-kevitra manaraka ao amin'ny famaritana vokatrao:
fa tsy momba ny marika famantarana ny vokatrao - raha tianao hotenenina izany na dia ao amin'ny lohatenin'ny vokatrao ho an'ny tanjona fanatsarana sy ny fijerena tsaratsara kokoa amin'ny fikaroham-bazana mifantoka kokoa - tsara ianao).
Ny tsipiriany tsy misy dikany (toy ny angona amin'ny zavatra hafa, tsy mifandraika amin'ny zavatra anananao any), ary koa ny anaran'ny mpivarotra, ny tranokalan'ny tranokala, na ny adiresy imailaka.
Fanehoan-kevitra mivelatra am-bava na antso amin'ny asa (ohatra, zavatra toy ny "fandefasana maimaim-poana," "tolotra manokana," "fivarotana voafetra," sy ny sisa).
Torohevitra Tsara indrindra ho an'ny Bullet Points ho an'ny Product Descriptions
Raha ny tena marina, ny lisitr'ireo bala amin'ny endriny dia misy dikany fohy kokoa ny famaritana ny vokatrao. Ary ny zava-misy dia tokony ho ny famaritana sy ny mombamomba ny bala araka izay azo atao. Amin'izany dia hevero ireto fombafomba fampiasana manaraka ireto mba hanatsarana ity fizarana ity ny lalana marina:
Ny teboka rehetra dia tokony hanomboka amin'ny teny kapitalisma.
Ny isa rehetra dia asaina nosoratana ho toy ny isa.
Ny fombam-pitenenana tsy marim-pototra tsy misy mari-tsoratra dia fanao tsara.
Ny fehezanteny tsirairay ao anatin'io bala io dia tokony hisaraka amin'ny semicolons.
Ny fampisehoana tsy mihoatra ny tombontsoa dimy na ny singa entina dia tokony.
Tokony asiana laharam-pahamehana manokana ny toetra manokana.
Ny fanambarana manjavozavo, toy ny fampiroboroboana, ny faktiora, na ny fampitam-baovao dia tsy atolotra ho an'ny lisitry ny teboka bala na inona na inona toe-javatra Source .